Nwanyị anyị nke Clearwater - WRSP
NWAANYI ANY OF NKE AKW CKWỌ AKWLEKWỌ
1929 (Jenụwarị 15) Fada Edward J. Carter, SJ mụrụ.
1991 Rita Ring malitere ịnata “ozi nzuzo nke Jesus na Meri.
1991 (Septemba 1) Meri pụtara n’ihu ụmụ nwanyị ise n’ọhịa dị na Indiana, na-akpọ onwe ya “Nwanyị nke Ìhè. Otu n'ime ụmụ nwanyị ahụ bụ onye ọhụụ na-amaghị aha ya nke bịara mara dị ka "The Batavia (Ohio) Visionary"
1992 Bissionvia Vissionary buru amụma na Virgin Mary ga-apụta na St Joseph Church na Cold Spring, Kentucky.
1992 (Mee) Mary kwupụtara na ya ga-ahọpụta ndị ụkọchukwu atọ dịka “ndị nnọchi anya pụrụ iche.”
1992 (August 31) Carter hụrụ ihe ọ kọwara dịka onyinyo nke Meri Nwa Agbọghọ na osisi dị na St Joseph Church.
1993 Carter malitere ịnata mpaghara site n'aka Jizọs.
1994 Carter guzobere ndị ọzụzụ atụrụ nke Kraịst Ministry mgbe a gwara Batavia Vissionary ka ọ tinye ya na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ga-anata ozi site n'aka ya na ịrụ ọrụ pụrụ iche nke iguzobe Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst.
1996 (Mee 31) Carter na onye ọhụụ Batavia hụrụ Meri n'ọhịa wee malite ịnata ozi ruo Septemba 13, 1997
1996 (Disemba 17) Otu onye ahịa na Seminole Finance Company na Clearwater, Florida hụrụ otu ihe osise dị egwu nke dịka Virgin Mary na iko iko nke gụnyere mgbidi ndịda nke ụlọ ahụ.
1996 (Disemba 19) Twobọchị abụọ ka egosịrị ihe oyiyi ahụ, Rita Ring, onye na-arụsi ọrụ ike na ndị ọzụzụ atụrụ maka ozi Christ, natara ozi site n'aka Meri na-enyocha ihe oyiyi ahụ.
1997 (Jenụwarị) Ndị uwe ojii Clearwater mere atụmatụ ngụkọta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 500,000 kemgbe ọhụụ mbụ ha.
1997 (Mee) Ihe ọjọọ a na-amaghị na-emebi ihe oyiyi ahụ site na ịgba windo na kemịkal na-emebi emebi.
1998 (July 15) Ring kwuru ozi sitere na Virgin Mary na-arịọ ka e wuo obe ma debe ya n'akụkụ ihe oyiyi ya.
1998 (Fall) Ugly Duckling Corporation gbazitere ụlọ 22,000 nke ụkwụ anọ ka ndị Shepherds of Christ Ministries, bụ ndị mechara zụta ma degharịa ya "Our Lady of Clearwater."
1998 (Disemba 17) Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist kpughere obe ụkwụ 18, nke Felix Avalos sere na saịtị ahụ.
2000 (Disemba 18) Nna Carter nwụrụ.
2000 (February) Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst meghere rosaries na-emepụta ihe nrụpụta na ala nke abụọ nke ụlọ ahụ.
2003 (Disemba) factorylọ ọrụ rosary mechiri n'ihi enweghị ego na ọrụ.
2004 (Machị 1) Onye wakporo kụrisịrị windo windo atọ kachasị elu nke gosipụtara isi ihe oyiyi ahụ.
Na December 17, 1996, onye ahịa na Seminole Finance Company na Clearwater, Florida hụrụ ihe osise tụrụ ya n'anya
yiri Virgin Mary na windo windo nke gụnyere mgbidi ndịda nke ụlọ ahụ. Ihe oyiyi ahụ nwere ihe dị ka mpempe iko iko iri na ụlọ ahụ ma ihe dịka 50 ụkwụ n'ogo na 35 ụkwụ n'obosara (Trull 1997). Onye ahịa ahụ nke hụrụ ihe oyiyi ahụ na mbụ kpọtụrụ ndị mgbasa ozi dị n'ógbè ahụ, n'ime awa ole na ole, ìgwè mmadụ gbakọtara na mpụga ụlọ ahụ iji hụ “ọrụ ebube Krismas.” Ndị na-efe ofufe, ndị nwere obi abụọ na ndị njem nwere mmasị malitere iju obodo ahụ. A manyere kọmitii obodo Clearwater ime ihe ozugbo iji kwado nnabata nke ndị ọbịa, na-eme atụmatụ na 80,000 kwa ụbọchị na Disemba, bụ nke obodo ahụ na-adịghị ahụkebe. N'ime ọnwa abụọ nke ọhụụ mbụ ahụ, ndị uwe ojii Clearwater mere atụmatụ na "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde mmadụ" eletala ebe ahụ ma guzobe "Miracle Management Team" iji mee ka ìgwè ndị njem ala nsọ (Tisch 2004: 2). Ka ọ na-erule oge opupu ihe ubi nke 1997, obodo ahụ “emefuola ihe karịrị $ 40,000… maka ịchịkwa ìgwè mmadụ” ma mesịa tinye akara mgbaàmà na ntanetị nke US 19 na Drew Street, ebe ụlọ ahụ dị (Posner 1997: 3).
Mgbe mbụ e kwusịrị mmasị ọha mmadụ, ọnụ ọgụgụ ndị pilgrim ji nke nta nke nta belata. N’ịgbasasị mmasị ọha na eze n’ihe onyonyo ahụ gbanwere mgbe, na May nke 1997, onye na-amaghị ihe ọjọọ onye fesara onyinyo ahụ mebiri ihe oyiyi ahụ, na-ekpuchi ihe oyiyi ahụ ruo nwa oge. Otú ọ dị, n’ọnwa na-eso ya “oké ifufe nke ụbọchị abụọ bibiri ihe ndị ahụ mebiri; ụfọdụ ndị pilgrim na-ezo aka n'ihe omume a dị ka onyinyo "ịgwọ onwe ya" (Trull 1997; Tisch 2004: 3). N’agbanyeghi mmasi ọzọ enwereghachi na mberede, n’afọ ndị na-esochi anya mbụ ahụ na ịnụ ọkụ n’obi ya, ọnụọgụ ndị ọbịa na saịtị ahụ agbadatala ihe dị ka narị abụọ kwa ụbọchị. Ka o sina dị, ọhụụ Clearwater nwere "ọtụtụ usoro mmepe nke… nke dugara na nhazi ya dị ka ebe ofufe" ma si otú a dịrị ogologo ndụ ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ saịtị ọpụpụ ndị ọzọ (Swatos 2002: 182). N'ime ihe ndị a bụ ịdịgide adịgide na nnagide nke onyonyo ahụ ruo mbibi ikpeazụ ya na 2004, mmalite nke onye ọhụụ nke nyere ozi metụtara foto ahụ, yana njikọta na Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst Minista.
N'oge a hụrụ, ụlọ ahụ yana Seminole Finance Company bụ nke Michael Krizmanich, onye Katọlik ji okpukpe ya kpọrọ ihe nke mechara resị ahịa ahụ Ugly Duckling Car Sales Inc. na ugly Duckling si ahịa, na ụlọ ọrụ mechara kpebie mgbazinye ụlọ ahụ ka Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Christ Ministri. Ndị Ọzụzụ Atụrụ ahụ gụgharịrị ụlọ ahụ “Mepụta Ihe Oyiyi Meri” wee gbanwee ime ya ka ọ bụrụ ebe nchụaja. Somefọdụ ndị otu Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist nke Ohio nọ na Ohio kwagara Florida. Otu n'ime ha bụ Rita Ring nke natara ozi na-egosi ihe onyonyo a na Clearwater na Disemba 19, 1996, nanị ụbọchị abụọ ka mbido ọhụụ mbụ.
Na ozi ọzọ nke Ring natara na July 15, 1998, Virgin ahụ rịọrọ ka a wuo otu nnukwu obe ma debe ya n'akụkụ ihe oyiyi ya na windo windo. N'ịbụ onye ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist na-akwado, ọ bụ ụkwụ ụkwụ iri na asatọ nke Felix Avalos kpụrụ, ka ekpughere na Disemba 17, 1998, afọ abụọ mgbe ọhụụ mbụ ahụ.
Na Machị 1, 2004, onyogho a mebiri emebi n'ụzọ a na - apụghị igbochi egbochi mgbe onye wakporo kụrisịrị windo atọ kachasị elu. Ọ dịla
kwuru na mbibi ahụ ji slingshot mee ka ọtụtụ obere bọọlụ dị iche iche gbasaa site na ogwe ndị nwere isi ihe oyiyi ahụ. N'agbanyeghị mmebi ihe oyiyi ahụ, Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst Minista jigidere Meri Image Building, Rita Ring wee na-anata ozi site na Virgin na Jesus Mana nbibi na-adịgide adịgide nke ọpụpụ belatara nleta na saịtị Clearwater.
Rita Ring abụrụla onye ọhụụ dị na Lady anyị nke Clearwater. Agbanyeghi na Ring ekwuputala na anatala ozi site na Jisos na Meri kamgbe 1991, ozi ndi na esochi odidi a na Seminole Finance Company nwere ihe jikotara ihe oyiyi Clearwater. Ozi Ring nke izizi achọtara onyinyo ahụ na Disemba 19, 1996 gosipụtara onyinyo ahụ ma jikọọ onyonyo ahụ na ebe ọ dị: I mewo ego chi gi! You ma ka obi gị jụrụ oyi? Na-agbakụta Ọkpara m, Jizọs, azụ maka ego gị. Ego gị bụ chi gị… ”(“ Akụkọ ”)
Ring kwuru na Meri rịọrọ ka mgbasa nke ozi ndị a dị ugbu a, nke ndị ga-esote, na nke "Mary Message," teepu e dere ede natara ụbọchị asaa tupu emume a na-eme kwa afọ nke Lady anyị nke Guadalupe. Enwetara ozi yiri nke a na Jenụwarị 23, 1997, nke Ring kọrọ banyere arịrịọ Meri maka ka e kesaa ọ bụghị naanị “Ozi Meri,” kamakwa ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ nke ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst Ministrị bipụtara. Akwụkwọ Bulu nke Chineke na Rosary si n’obi Jisos na Meri. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ozi ahụ gosipụtara iwe Chineke site na mmehie mmadụ na enweghị ike ige ntị na ozi ndị gara aga, na-eyi mmadụ egwu na ọkụ, ọbụnadị na-ekwu banyere nleghara anya nke okpukpe na iwe Chineke dị ka isi iyi nke ọkụ ọgbụgba n'oge a na Florida. Enweela amụma banyere oge ikpeazụ. Ozi niile nke Ring ka Papa Carter choputara.
O doro anya na ọrụ okpukpe metụtara Clearwater gbanyere mkpọrọgwụ na Katọlik ma kwekọọ na nkwenye nke ọtụtụ ụdị ngosipụta dị otu a maka mkpa ịlaghachi na nkuzi nke Kraịst. Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst Ministrs chọkwara ogo nke ecumenism. Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ ahụ kpebiri inweta ụlọ akụ ahụ na 1998, ndị otu ahụ kwupụtara ebumnuche ya “ịmepee saịtị ahụ maka ndị okwukwe niile maka ekpere dị jụụ na izu oke,” ma jụọkwa nkewa okpukpe, na-ajụ “Ọ bụ na anyị niile anaghị ekpe ekpere otu Nna ahụ nke Eluigwe? ” (Swatos 2002).
N’oge na-adịghị anya mgbe mbụ m hụrụ ọfụma Clearwater, e wuru ụlọ arụsị nwa oge na ebe ngosi ahụ nwere bench, igbe onyinye, kandụl, chaplet, foto, ifuru, kandụl, na arịrịọ ekpere. Ọbịa na saịtị ahụ ọtụtụ mgbe hapụ onyinye nye Virgin, dị ka "kandụl, ifuru, mkpụrụ osisi, na beads, ma sonye na omume nsọ nsọ ọ bụla (Posner 1997: 2). Arịrịọ Meri maka ndị njem ala nsọ, dị ka Ring kwuru, gụnyere ekpere, ịkpọghachi Iwu Iri ahụ kwa ụbọchị na saịtị ahụ, ịgụghachi rosary, na idebe ofufe Satọdee Mbụ. Iji mezuo arịrịọ nke Virgin iji kesaa ozi ya ma duru ndị ọzọ n'ekpere, a na-akpọ teepu nke "Ozi Mary" na chaplet, akwụkwọ nta, na broshuọ site n'aka ndị ọrụ saịtị (Swatos 2002: 192). Ihe a na-elekwasị anya na ofufe mmadụ n'otu n'otu, kama "mmetụta nke Mass ahụ," bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na-edozi nzukọ Clearwater na-abụghị otu nhazi Katọlik (Swatos 2002).
Ndị njem ala nsọ na saịtị ahụ na-enyekwa aka n'echiche nke ịdị adị dị nsọ na ohere nke ọrụ ebube. Iji maa atụ, n’etiti ụfọdụ ndị njem ala nsọ sitere na obodo Latino enwere echiche na Mary nwere ike inyere otu onye ntorobịa gbara ọsọ ndụ si Cuba bụ onye gbara ọsọ ndụ na United States: “Tessy Lopez, 62, nke Miami Beach nwere ọ joyụ ka ọ na-eleta ngosipụta ahụ. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ gbakọtara na saịtị ahụ, Lopez kwuru na ya lere ya anya dị ka ihe ịrịba ama nke ọrụ ebube na-abịanụ maka Elian, onye dị afọ 6 nke Cuban onye
lanarịrị njem nke gburu nne ya na mmadụ 10 ndị ọzọ I .Echere m na nwa nwoke ahụ gọziri agọzi. Ọtụtụ mmadụ nyere ndụ ha maka nwatakịrị nwoke ahụ, ọ na-ebikwa ebe a, "Lopez kwuru. "Anyị ga-achọpụta na nke a bụ ihe ịrịba ama dị mkpa" (Garcia 2000). Barbara Harrison (1999) gara ebe ahụ na ekeresimesi, 1996 wee kọọ ozi sitere na Mary nke a gwara ya "A họrọla m gị dịka ụgbọ nke aga-agbasa ozi m…. Ou ga-agarịrị ụbọchị a na nke gara aga. nzukọ n'ime akwụkwọ Y .ou ga-akọrịrị ọrụ ebube gbasara ịmụ nwa na ikuchi nwa. ”
Amabeghị ihe banyere ndụ otu n'ime mmadụ abụọ nọ na Clearwater. A kọwara Rita Ring dịka nwanyị lụrụ nwanyị nwere ụmụ anọ, prọfesọ mgbakọ na mwepụ na Mahadum Cincinnati, yana ezigbo onye Katọlik ma bụrụ onye otu Ndị Ọzụzụ Atụrụ Kraịst. A kọrọ na ọ malitere ịnata "mkpughe onwe onye" n'aka Jizọs na Meri na 1991, ọtụtụ afọ tupu ọ kọọ ozi metụtara ihe oyiyi ahụ na Lady anyị nke Clearwater. A maara ihe karịa Fada Edward Carter. A zụlitere m Cincinnati, gaa Mahadum Xavier, ka e chiri ya na iwu Jesuit mgbe ọ dị afọ iri atọ na atọ, wee kụzie nkà mmụta okpukpe na Mahadum Xavier ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ. Carter na-akọ na ọ malitela ịnata ozi sitere n'aka Jizọs n'oge ọkọchị, 33, na ụbọchị tupu Ista na 1993 ka a gwara ya na ọ ga-amalite ịnata ozi maka ndị ọzọ (Carter 1994). O guzobere ndị ọzụzụ atụrụ nke Kraịst Ministry na 2010 mgbe a gwara Batavia Vissionary ka ọ tinye ya na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ga-anata ozi site n'aka ya na ịrụ ọrụ pụrụ iche nke iguzobe Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraịst. Carter natakwara ozi site n'aka Jisos bu nke agwara ya ka ebido ozi a ma tinye Rita Ring: A nam ario ka ebido nmeghari ohuru ohuru site na ntuzi aka nke ndi ozuzu aturu nke Kraist Minista…. Aga m eji usoro ekpere ọhụrụ a n’ime My Shepherds of Christ Ministries n’ụzọ dị ike iji nyere aka na mmegharị nke Churchka m na ụwa. M ga-enye ndị sonyere ngagharị a nnukwu onyinye…. A na m akpọku Rita Ring m hụrụ n'anya ka ọ bụrụ onye nhazi maka ọrụ a "(" Banyere "1994).
Na Disemba 19, 1996, ụbọchị abụọ ka ekwusịrị ihe oyiyi ahụ na Seminole Finance Company Building, Meri gosipụtara nnabata Clearwater na Rita wee gwa Rita ka ọ malite ọrụ na Florida. Ring malitere ije ozi dị ka onye nyocha, na Carter ozi ya (mata) nke oma. Ruo oge ụfọdụ ọ na-anata ozi kwa ụbọchị nke a na-enye ya n'ime thelọ Ozi ahụ na teepu vidio. Mgbanaka gara leta ihe mechara "Mary Image Building" na nke ise n'ọnwa ọ bụla. Malite n’afọ 2000, afọ Jubili, ihe oyiyi ahụ apụtawo ka ọ gbanwee ọlaedo kpamkpam n’ụbọchị ahụ.
Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist Minista kọwara onwe ya dị ka "ọgbakọ dị iche iche, nke mba dị iche iche, nke mejupụtara ọtụtụ ndị mịnịstrị niile raara onwe ha nye" iweta okwukwe nke Churchka Katọlik n'ezi ịhụnanya na nsọpụrụ miri emi maka Obi Jizọs na nke Meri. " Emeghere ndị ụkọchukwu, ndị okpukperechi na ndị nkịtị, ozi ugbu a nwere ihe karịrị 150 ekpere isi na netwọkụ ya zuru ụwa ọnụ tinyekwara maka ọdịmma ime mmụọ nke ndị ụkọchukwu ”(Shepherds of Christ Ministries nd). Ndi otu a na ewezuga onwe ha ikwalite odimma ndi nchu aja ma gba ndi nwere mmasi na ndu ime mmuo ume ka ha kpee Chapleti ma soro na Oriri Nsọ. Ebumnuche bụ isi bụ ịgba ndị ụkọchukwu ume ka ha "dịkwuo nsọ, ya mere ọdịnala, ma hapụ ọchịchọ nke oge a" (Swatos 2002: 182). Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Christ Movement depụtara mịnịstrị ya dịka ndịozi nke Eucharistic Heart of Jesus, bụ nke kwere ndị otu ahụ ekpere na ha ga-ekpe ekpere n'ihu Sacramenti Ngọzi maka awa abụọ kwa izu; ihe “ofufe oge 24” dị na China, Indiana, nkwado maka ebe a na-elekọta ndị agadi; "Conlọ nke ”lọ nke ”lọ" maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ; na mmemme iji nyefee chaplet ndị e ji aka ha akwụ ụgwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị Katọlik ("Minista nd)
Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Christ ministri bidoro gbazite ụlọ ụlọ akụ na 1998 wee mesịa zụta square-square-22,000
etiti maka ihe karịrị nde dollar abụọ. Otu ahụ malitere ịkpọ ụlọ ahụ "Nwanyị anyị nke Clearwater." Na Julaị 15, 1998 ozi kwa ụbọchị si n’aka Meri kwuru na “achọrọ m ka e tinye obe n’obe dị nso na windo dị n’akụkụ ihe oyiyi m. Anya m na-adịkarị na nwa m nwoke Jesus akpọgidere n’obe ma obi m maara mbilite n’ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ m (“Desrochers 2007). Felix Avalos kpụrụ osisi a kpọgidere n'obe ụkwụ iri na asatọ, ka ekpughere ya na Disemba 18, 18. Ndị ọzụzụ atụrụ mechara mepee ụlọ ọrụ rosary na ụlọ ahụ n'afọ 1998 wee wuo ụlọ ụka maka ofufe.
Ka ọ na-erule 2002, mmasị ọha na eze nwere na saịtị ebelatala nke ukwuu; E kpuchiri ihe a kpogidere n’obe ahụ n’ihi ihu igwe na-ebuwanye nsogbu; ebe a na-adọba ụgbọala nke ndị njem ala nsọ gbakọtara bụ ihe efu; ụlọ ọrụ rosary enweghị ike ịkwado onwe ya wee mechie; otu a enweghi ihe ịga nke ọma n’ịkwado saịtị ahụ site n’ire taịl nile edere aha onye nyere onyinye. Mbibi nke ọdịdị nke onyinyo onyinyo na 2004 mere ka ọ ghara ịda mbà na saịtị ọhụụ.
Otu esemokwu pụtara ìhè gbara gburugburu ihe oyiyi ahụ na Clearwater bụ isi iyi nke ihe oyiyi n'onwe ya. Mgbe Ring kwuru na Virgin Mary gosipụtara ọdịdị ya ụbọchị abụọ ka ọhụụ mbụ ahụ gasịrị na Disemba 17, 1996, foto e sere na ụlọ ahụ na 1994 na-ekpughe na onyinyo ahụ adịla ruo oge ụfọdụ ma hụ ya naanị mgbe nkwụ na-ekpuchi akụkụ ụfọdụ. windo, wepụrụ. Ọzọkwa, dị ka Posner si kwuo, “ọ dị onye njem okpukpe ọ bụla, onye nta akụkọ, ma ọ bụ onye ọ bụla bịara ileta ya anya ga-agagharị n'ụlọ ahụ iji mara na 'ọdịdị nke Meri' abụghị nanị ụdị ihe osise dị otú ahụ. N'ezie, ntụpọ iridescent nke ụdị ọdịdị ahụ pụtara na gburugburu ya gburugburu ebe ọ bụla ejiri iko enyo gosipụtara, ọ dịkwa mma nke ọma ebe ahịhịa na isi ndị na-agba mmiri dị nso na iko ahụ. N’ogige ndị dị ala, ntụpọ ndị ahụ na-apụta n’elu n’elu ha; ebe nkwụ na-eto elu, ntụpọ na-agbaso ”(1997: 1). Otu ọkà mmụta ọgwụ dị na mpaghara nyochara windo ndị ahụ wee kwuo na ọ bụ mmiri mmiri jikọtara ya na ihu igwe na -emepụta ntụpọ ahụ, na-enye mmeghachi omume kemịkalụ dịka nke a na-ahụkarị na karama ochie, ikekwe n'ihi ọrụ nke mmiri mmiri. Otú ọ dị, ndị na-agbaso ọdịdị chi nke ihe oyiyi ahụ na-arụ ụka na ihe ọrụ ebube banyere ihe oyiyi ahụ esiteghị na ya, kama ọ bụ eziokwu ahụ bụ́ na “ngwakọta nke ihe ndị a mejupụtara onwe ya n’ihe oyiyi a, kama, dị ka ihe atụ, usoro nke ebili mmiri na-adịghị mma” (Swatos 2002).
Ihe oyiyi a esitewokwa na ndị ọbịa bịara nleta dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, "Ana m ahụ ntụgharị uche, mana anaghị m ahụ ya," ka Carmen Rodriguez, 50, nwere mmetụta nke ndakpọ olileanya kwuru. “Echere m na ụfọdụ ndị nwere ike ịhụ ya ma ndị ọzọ agaghị ahụ ya. Ikekwe ọ dabere n'ịdị mkpa. ” Na, Eulalia Asencio, 29, gosipụtara nkwenye. O kwuru na ya ejirila nlezianya metụ windo windo ahụ iji hụ ma ntụ oyi nwere ike ime ka onyinyo ahụ pụta. “Ọ dị ka mgbe ị nwetara Windex na mgbe ahụ ị ga - enwe egwurugwu ahụ na - aga n’ihu,” ka Asencio kwuru. "Echere m n'ezie na ọ bụ ngosipụta nke ìhè" (Garcia 2000). N’aka nke ọzọ, nye ọtụtụ ndị njem ala nsọ ihe onyonyo a nyere ahụmịhe dị egwu nke ọnụnọ Chukwu, dịka oke igwe mmadụ gosipụtara, onyinye na arịrịọ ekpere ha hapụrụ n’ụlọ arụsị, na akaebe nke ọrụ ebube. Barbara Harrison (1999: 20), onye na-abụghị onye Katọlik, kwuru na mgbe ọ bịarutere ebe ahụ "Igwe mmadụ juru anya na-elepụ anya na egwurugwu egwurugwu nke mama Meri a gọziri agọzi Mary. Adịghị m njikere maka ọsọ nke mmetụta uche m nwetara…. O juru m anya, na ịdị nsọ nke oge ahụ wepụrụ ume m.
Enweela esemokwu dị ntakịrị n'etiti Chọọchị Roman Katọlik na ndị isi Nwanyị anyị nke Clearwater. Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Christ ministri na-egosi onwe ya dị ka nzukọ Katọlik nkịtị mana ọ nweghị mmekọrịta ọ bụla na ụka. Ndi nnochite anya saiti a akpachala anya ghara ido ndi isi uka Roman Katoliki aka. Iji maa atụ, otu a gosiri na ọ ga-achọ ikike n'aka diocese mpaghara ahụ tupu ha wuo ụlọ ụka na saịtị ahụ. Fada Carter ekwuola ugboro ugboro na "A matara ma nabata na ikike ikpe azụ gbasara mkpughe nke onwe dị n'aka Holy See nke Rome, onye m ji obi m nye ikpe ya" ("News" nd). Katọlik diocese nke St. Petersburg enweghị isi na njikọ Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist ma kpọọ onyonyo a “ihe ngosi nke pụtara ihe.” Otú ọ dị, diocese amaliteghị nyocha nke saịtị ahụ ma katọọ ya ("Clearwater Madonna Changes Hands" 1998; Tisch 2004: 4). Enwere nkatọ ndị ọzọ sitere na ndị Katọlik na-ekwubi na ngosipụta ahụ abụghị eziokwu (Conte 2006).
A na-eme atụmatụ na e nweela ndị ọbịa 1,500,000 bịara na ngosipụta nke Lady anyị nke Clearwater kemgbe 1996. N'agbanyeghị oke ọdịda nke ma ndị njem ala ma ndị njem nleta na Mary Image Building na-eso mbibi 2004 nke onyinyo ahụ, Ndị Ọzụzụ Atụrụ nke Christ Minista gara n'ihu jidere recitations nke ozi Meri na-adị kwa ụbọchị n'ụlọ ahụ. Edebatala ozi ndị ahụ na weebụsaịtị nke ndị ọzụzụ atụrụ Kraịst tinyekwara n’akwụkwọ ndị nzukọ ahụ bipụtara. ”
“Banyere.” 2006. Ndị ọzụzụ atụrụ nke Kraịst ministri. Nweta site na http://www.sofc.org/ABOUT/abouthom.htm na 10 March 2013.
Carter, Edward. 2010. Gwa ndị m: site n’aka Fr. Edward Carter, SJ Nweta site na http://deaconjohn1987.blogspot.com/2010/10/tell-my-people-by-fr-edward-carter-sj.html
"Clearwater Madonna Na-agbanwe Aka." 1998, Julaị 11. Nweta site na http://www.witchvox.com/media/mary_shrine.html na 10 March 2013.
Conte, Ronald. 2006. “Nkwupụta nke Nkpughe Onwe Onye: Ọ Bụ Eziokwu ma ọ bụ Eziokwu? Ntụle nke Ozi nke Rita Ring. Katọlik Katọlik. Nweta site na http://www.catholicplanet.com/apparitions/false45.htm na 10 March 2013.
Ndị na-achọgharị ihe, Claude. 2007. "Jizọs na Meri na Clearwater, Florida." JPG, 30 November. Nweta site na http://jpgmag.com/stories/2033 na 10 March 2013.
Garcia Sandra Marquez. 2000. Meri “Pụtara Na Nso Elian.” The Miami Herald, 26 Machị. Nweta site na http://www.latinamericanstudies.org/elian/mary.htm na 10 March 2013.
Harris, Barbara. 1999. Mkparịta ụka ya na Meri: Ọrụ ebube nke oge a na ndụ kwa ụbọchị. Osprey, FL: Ndị na-ebipụta ụlọ na Heron.
"Ozi." Nd Ndị ọzụzụ atụrụ nke Kraịst Ministires. Nweta site na http://www.sofc.org/ministries2.htm na 10 March 2013.
“Akụkọ.” Ndi Ọzụzụ Atụrụ nke Kraist. Nweta site na http://www.sofc.org/news_1.htm na 8 March 2013.
O'Neil, Barbara. 2000. "Ndị Kwere Ekwe Nụrụ: Mee Rosaries," Petersburg Times, 15 Ọktoba. Nweta site na http://www.sptimes.com/News/101500/NorthPinellas/Believers_hear__Make_.shtml na 5 March 2013.
Posner, Gary P. 1997. "Tampa Bay si ekeresimesi 1996 'Virgin Mary Apparition'," Tampa Bay Skeptics Report. Nweta site na http://www.tampabayskeptics.org/v9n4rpt.html na 3 March 2013.
Ndị ọzụzụ atụrụ nke Kraịst ministri. nd “Virgin Mary Gwara Cincinnati Visionary Why her Image Apppears on FL Office Building.” Nweta site na http://www.sofc.org/news_1.htm na 10 March 2013.
Swatos, William H., Jr. 2002 “Nwanyị anyị nke Clearwater: Omenala Omenala Ọhụrụ.” Pp. 181-92 na Site na njem uka nke oge ochie gaa njem nlegharị anya okpukpe: akụ na ụba na ọdịbendị nke okpukpe, nke William H. Swatos, Jr. na Luigi Tomasi dere. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
Tisch, Chris. 2004. "Maka Meri Kwesịrị Ntụkwasị Obi, Mfu Na-agbasasị." Petersburg Times, 2 Machị. Nweta site na http://www.sptimes.com/2004/03/02/Tampabay/For_Mary_s_faithful__.shtml na 3 March 2013.
Trull, D. 1997. “Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke Nwere Ike Ime Windows?” Nweta site na http://dagmar.lunarpages.com/~parasc2/articles/0797/mary.htm na 3 March 2013.